Kitra afrikanina: samy vonona handresy ny Cnaps sy ny Elgeco Plus | NewsMada
Kitra afrikanina: samy vonona handresy ny Cnaps sy ny Elgeco Plus
Hampiantrano, lalao iraisam-pirenena roa goavana, ny taranja baolina kitra, amin’ity anio ity. Hotanterahina, etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina sy eny Vontovorona, ny fifaninanana afrikanina, handraisan’ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus, anjara.
Hifantoka amin’ny taranja baolina kitra avokoa ny sain’ny rehetra, amin’ity alarobia ity, na eo aza ny famoahan’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny voka-pifidianana eo amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny repoblika. Hotanterahina amin’ity anio ity tokoa mantsy ny lalao mandrdoso eo amin’ireo fifaninanana afrikanina, handraisan’ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus, anjara amin’izany.
Hizara roa ny fifaninanana, satria etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina, no handray ny Deportivo Unidad, avy any Ginea Ekoatorialy, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona. Eny amin’ny kianja Complexe sportif Vontovorona kosa indray no hampiantrano ny FC Platinum avy any Zimbaboe, ny Cnaps Sport, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika.
Ekipa samy tsy fantatra avokoa izy roa tonta ireo. Na izany aza, mety tsy hifanalavitra amin’ny fomba filalaon’ireo ekipam-pireneny. Vonona tanteraka ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus, hiatrika ireo mpifanandrina aminy ireo. Efa tonga eto rahateo ny Zimbaboeanina sy ny Gineanina, nanambara fa tsy hiaro tena fa hamono baolina.
Tsotra ny paikadin’ny mpanazatra malagasy, amin’ity lalao mandroso ity. Mila mamono baolina roa farafahakeliny ary tsy hamonoana baolina. Na izany aza, mila mitandrina ihany eo amin’ny fiarovantena fa manao baolina langalanga ireto ekipa ireto satria somary manatombo eo amin’ny haben’ny vatana.
Marihina fa lalao savaranonando, ity hatrehin’ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus ity. Afaka herinandro ny fihaonana miverina, izany hoe hatao ny 4 na ny 5 desambra, ho avy izao. Manantena ny fahatongavan’ny mpijery ho maro izy ireo, hanohana sy hankahery, hatramin’ny farany.